Tempoly Bodista Fahagola Kasain’i Shina Hosolaina Tanteraka · Global Voices teny Malagasy
Tempoly Bodista Fahagola Kasain'i Shina Hosolaina Tanteraka
Voadika ny 13 Avrily 2013 21:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Magyar, English
Ny manampahefana Shinoa ao an-toerana, ho fitsinjovana ny sombin'ny lalan'ny lasoà manan-tantara, no nibaiko ny fandravana toerana manan-tantara iray hafa mijoro amin'izany lalana izany.
Ny tempolin'i Xingjiao ao Xi'an, izay mitahiry ny sisan'ny moanina bodista niaina tamin'ny taonjato faha-7 Xuan Zang, no hanaovana fandravana amin'ny ampahany mba hanomezan-toerana ny zava-maitso ho fangatahana ny hampiharan'ny fitantanam-panjakana ao an-toerana ny haha-toerana vakoka ara-kolontsaina iraisampirenena UNESCO azy ka ho anisan'ny lalan'ny lasoà ao amin'ny faritany Shaanxi. Eo ho eo amin'ny roatokon'ny tranon'ny tempoly no horavana hatramin'ny fakany mandra-pahatongan'ny faran'ny volana Mey 2013.
Hafindra toerana ny relika manan-tantara sasantsasany ahitana ny sarintavan'i Xuan Zang. Notsipahan'ny manampahefana ao an-toerana ny antson'ny moanina tsy hanetsehana ny tempoly.
Niantso ny hanaovana fanadihadiana amin'ny drafi-pandravana ny Biraom-panjakan'ny raharaham-pivavahan'i Shina.
Navoitran'ny [zh] vaovao ny hasosorana hita ao amin'ny habaka famahanam-bolongana bitika malaza indrindra ao Shina antsoina hoe Sina Weibo, ahitana ny mpisera mitsikera ny manampahefana noho ny fanaovany tsinontsinona ny lanja ara-tantaran'ny tempoly. Niditra ho amin'ny fanoherana an-tserasera ireo mpanoratra, olo-malaza ary ny olona manana ny mahaizy azy an-tserasera, miantso ny hampitsaharana ny fandravana.
Wang Yunxia, talen'ny Ivotoeran'ny Vakoky (ara-kolontsaina) ny lalàna avy ao amin'ny Onivesitem-Bahoaka, manombatombana [zh] fa ataon'ny fitantanam-panjakana ao an-toerana ho fitaovana hahazoam-bola ny tantara sy ny kolontsaina:
Vavahadiben'ny Tempolin'i Xingjiao ao Xian. Saripikan'ny bilaogera Guozi.
Ambadiky ny fandravana mafonja amin'ny anaran'ny fampiharana ny Vakoka Iraisampirenena ny toerana iray, ny fikasan'ny fitantanam-panjakana ao an-toerana angamba dia ny hampiroborobo ny fanangana-trano.
“Liuxiao Lintong”, mpiantsehatra iray fantatra tamin'ny filalaovana ny anjara toeran'ny Mpanjaka Ragidro tamin'ny andian-tantara fahitalavitra tamin'ny 1988 mitondra ny lohateny hoe “Dialavitra mankany Andrefana”, izay nakana aingam-panahy avy amin'ny dialavan'ny moanina Xuan Jang mankany India, no niantso [zh] fanohanana bebe kokoa avy amin'ny manampahefana ambony kokoa:
埋有玄奘大师灵骨的西安兴教寺正面临大规模拆迁，当地政府给出的拆迁原因是丝绸之路联合申遗的需要，据说是投 资建设“兴教寺佛教文化旅游景区建设项目”，我的佛友宽池法师作为寺院住持阻止无效，网民们都在呼吁我给予关注，事关重大，我作为一个演员真诚地希望国家 宗教局等有关机构及领导出面协调。
Miatrika ny lozan'ny fandravana goavana ny tempolin i Xingjiao, izay nandevenana ny taolambalon'ny Sensei Bodista Xuan Zang [Fiankohonana Tang]. Ny antony lazain'ny mpitondra fanjakana ao an-toerana hanaovana izany dia ny mba hahatonga azy ho toeram-bakoka iraisampirenena UNESCO lalan'ny lasoà azy. Voalaza moa fa ny drafitra dia ny hampiasa vola ao amin'ny “Tetikasam-pananganana habaka malalaka ara-kolontsaina ho amin'ny Fizahantany ao amin'ny Tempoly Bodista Xingjiao”. Niezaka ny hanakana izany ny namako Bodista Sensei Kuanchi, mpiandry lehiben'ny tempoly, fa tsy nisy valiny. Niantso ny fanohanana avy amiko ny mpiserasera. Mihevitra aho fa raharaha goavana izy ity, amin'ny maha-mpiantsehatra ahy, manantena tokoa aho fa hijery momba ity raharaha ity ny manampahefana isan-tokony sy ny mpitarika ny ao amin'ny Birao Misahana ny Raharaham-Pivavahana.
Nitsikera ny olona manana ny lazany an-tserasera sady mpampiasa vola “Xue manzi” [zh]:
Tafajoro an'arivony taona ihany ireny tempoly antitra ireny. Ho sahinao ve ny hanao izany noho ny fitadiavam-bola? Na i Genghis Khan aza tsy nieritreritra ny hanao izany rehefa nanani-bohitra ka nandresy an'i Shina. Mao Zedong sy ny Revolisiona Ara-Kolontsaina namotika fasana Konfiosianina maro saingy hany sisa navelany hijoro ny Xuan Zang! Manohitra tanteraka ny famotehana aho! Raha manohana ahy ianareo, azafady ampitao ny hafatro! Avelao hanjaka ny hevi-bahoaka amin'ny bilaogy-bitika.
Namaly [zh] izany no talen'ny mpampiranty zavakanto “Shuai mindan” :
Afa-mikosoka izay sisan-tsivilizasiona rehetra ny manampahefana eo amin'ny sehatry fananana tsy azo ahisaka (trano sy tany), mampalahelo!
Nanoratra [zh] ny mpaneho hevitra amin'ny vaovao Yang Jinlin:
Tsy maintsy miteny ihany aho, ny vakoka manerantany eto amin'ny firenentsika tsy McDonald na lalana fahagola sandoka. Miangavy aza mampiasa ny fanatontoloana na ny pragmatisma enti-mandrava 5000 taonan'ny sivilizasiona. Raha misy olona mitady toerana hanaovana azy ho Vakoka ara-kolontsaina manerantany ho toy ny milina mpizara vola enti-mandrava vakoka ara-kolontsaina, dia hanao fihetsiketsehana hanoherana izany izahay.
Namakafaka [zh] ny halalin'ny olana nateraky ny fandravana ny tempoly ny manampahaizana momba ny fampiasam-bola stratejika Yue Chuanbo:
这是权力与资本在中国野蛮生长的一个表现。当失去了道德，而权 力本身又几乎不受制约的时候，权力和资本就会沿着有利于私人的路径放浪狂奔，它们不在意破坏一切，包括人们的物质家园和精神家园。民众要通过广泛的发声， 形势正义的声势；而高层需要道义的觉醒。
Izao no fanehoana ny fahefana sy fitadiavam-bola tsy voafehy eto Shina. Rehefa very ny maoraly ary tsy voafehy ny fahefana, soavaly tapa-kofehy tsy mahalala afa-tsy ny tombontsoany manokana ny fahefana sy ny renivola. Tsy miraharaha izay fahapotehan-javatra any ry zareo, anatin'izany ny fonenana hita maso sy ara-panahin'ny olona. Mila mijoro mampiray feo ny mpiserasera hiantso ny rariny; mila fifohazana ara-maoraly ny fahefana mpanatanteraka.